को हुन, रैछाकुले (हेत्छाकुप्पा) ? «
को हुन, रैछाकुले (हेत्छाकुप्पा) ?
प्रकाशित मिति : ३० भाद्र २०७५, शनिबार १८:११
मुन्धुमस्टार टिम /बिभिन्न श्रोत
काठमाण्डौ- मानवलाई जंगली युग बाट खेतीपाती र सभ्य युग हुदै आजको प्रविधिको युग सम्म ल्याई पुर्याउने महान् किराती पुर्खाहरु तयामा खियामा र रैछाकुले हुन् ।
मुन्दुम अनुसार तयामा खियामा र रैछाकुले (खोक्चिलिप्पा) महान पुर्खाहरु पापा (बुबा) पातेसुंग र मामा (आमा) दिलिदुमका सन्तान थिए । रैछाकुले (खोक्चिलिप्पा) जालले कोशीमा माछा मार्थे, धनुकांडले शिकार खेल्थे । तयामा खियामा कपडा बुन्थे । यी तिन पुर्खाहरुले मानव विकासको निम्ति ३ अद्भुत सवालको आविस्कार गरेका थिए ।
१.– माछा मार्ने क्रममा जालमा बारम्बार परेको ढुंगा नाग राजाको छोरी वाईलुङ्मा बनेपछि उनि संग विवाह गरे । यसबाट विवाह सस्कृति र घरजम को थालनी भयो । (तुवाचुङ जायाजुङ डाँडामा उत्खनन गर्ने क्रममा भेटिएको गोलो ढुंगा रैछाकुले ले जालमा पारेको वाईलुङ्माको सास्कृतिक प्रतिक हो) ।
२. – शिकार खेल्ने क्रममा रैछाकुले (खोक्चिलिप्पा) ले ढुकुर मारे । त्यसको गाँडमा फेला परेको अन्न (कोदो) बारीमा छर्दा फलेपछि पाठ लिदै आफैले पनि खेति गर्न सुरु गरे । तर नया अन्न पितृ पुर्खालाई नचढाई खाएका कारण बिरामी परेको विश्वासमा न्वागी गरे । यो सस्कृति अहिले पनि किरात र किरात राईहरुले बिभिन्न नाममा अटुट रुपमा मनाउदै आईरहेकोछ ।
३. – जंगली (शिकारी) जीवन व्यतित गरेका मानवहरुले सुरुमा नरम खालका रुखपात का बोक्रा जनावरका छाला कपडाको रुपमा प्रयोग गर्थे । तर खेतीपाती सुरु गर्न थाले पछी कपडा बुन्नु मानव जातिले गरेको अर्को महान आविष्कार थियो । जुन तयामा खियामाले सुरु गरेका थिए ।